“Meel cadaadis la isku saaro in Argagixisada la sii daayo ma arag, M/weynahana…” | Somaliland.Org
“Meel cadaadis la isku saaro in Argagixisada la sii daayo ma arag, M/weynahana…”
May 26, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ahna Murashaxa jagada Madaxweynenimo ee xisbigaas Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay qoraal uu soosaaray Madaxweyne Rayaale.
Madaxweynaha Somaliland oo Isniintii doraad soosaaray qoraal kooban oo ku qornaa luqadaha Soomaaliga iyo afka Ingiriisiga, waxa uu ku sheegay in socdaalkiisii u dambeeyay oo uu ku tegay dalal ka tirsan qaaradda Yurub, culays lagu saaray inuu sii daayo maxaabiis falal Argagixiso u xukuman oo ku jira jeelasha dalka.
Hase yeeshee, guddoomiyaha xisbiga UCID oo xalay Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay aragtida xisbigiisa ee la xidhiidha qoraalkaas, waxa uu sheegay in qoraalkaasi yahay mid macquuliyaadka ka fog, isla markaana aanay suurtogal ahayn in cadaadis lagu saaro sii daynta dad falal Argagixiso loo haysto. “Anigu markii aan arkay qoraalkaa waan fahmi waayey, waayo maan arag madaxweyne yidhaahda adduunka ayaa igu khasbay inaan sii daayo Argagixiso,” ayuu yidhi guddoomiyaha xisbiga UCID. “Waan maqli jiray Madaxweyne leh adduunkaa culays igu saaray inaan Argagixisada wax ka qabto, sida imika Yemen oo kale culayska lagu saaray inay wax ka qabtaan Argagixisada dhulkooda. Laakiin, arrintaasi aniga maankayga way gali wayday, markaa ilama aha wax suurtagal ah inay dawladaha adduunku yidhaahdaan siidaa Argagixisada. Waa laga yaabaa dawladaha adduunku inay qof xuquuqdiisa meel lagaga dhacay ay dawladaha culays ku saaraan, laakiin Argagixiso meel culays la isku saaro in la siidaayo maan arag. Markaa arrintaa aad iyo aad uma fahamsani, markaa waxaanu jecelnahay inuu intaa in ka badan sii faahfaahiyo oo uu umadda u sheego,” ayuu raaciyay.
Guddoomiyaha oo la waydiiyay sida uu u arko xilliga lagu beegay qoraalkaa aan nuxurkiisa la fahmin ee Madaxweynuhu soosaaray, waxa Madaxweyne Rayaale ka codsaday inuu umadda u iftiimiyo warsaxaafadeedkaas aan ujeedadiisu cadayn. “Xilligii kastaba maaha wax ku fiican, waxanina wax caqli gal ah maaha, wax ku kalifay Madaxweynahana inuu warsaxaafadeed noocaas ah soo saaro anigu garan maayo, waxaanan Madaxweynaha ka codsanaynaa inuu intaa in ka badan dadka u sheego,” ayuu yidhi Murashaxa xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe.
Previous PostHargeysa: Shil Baabuur oo dhimasho iyo dhaawac keenayNext PostXukumadii Riyaale Oo Soo Cusboonaysiisay Mashruucii OLalaha Argagaxisnimada	Blog